Wasiirka Dhalinyaradda iyo Isbootiga oo tababar usoo xirtay dhalinyaro Soomaaliyeed | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiirka Dhalinyaradda iyo Isbootiga oo tababar usoo xirtay dhalinyaro Soomaaliyeed
Wasiirka Dhalinyaradda iyo Isbootiga oo tababar usoo xirtay dhalinyaro Soomaaliyeed
Tababarkan oo socday mudo laba maalmood ah ayaa loo qabtay dhalinyaro ka kala socotay 17-ka Degmo ee uu ka koobanyahay Gobolka Banaadir waxaana si wada jir ah usoo qaban qaabiyey Maaamulka Gobolka banaadir iyo Hay’adda Ifraax Foundation.
Wasiirka Dhalinyarradda Iyo Isboortiga Khadiijo Maxamed Diiriye iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Thaabit Cabdi Maxamed ayaa kasoo qeyb galay munaasabada Xiritaanka tababarkan loo sameeyey Dhalinyaradda Gobolka Banaadir oo looga hadlayey fahamka nabadda iyo xalinta khilaafaadka.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna Duqa Magaaladda Muqdisho Mudane Thaabit Cabdi Maxamed ayaa sheegay in dhalinyaradda Gobolka Banaadir ay si siman uga faaideysan doonaan haddii gobolka uu helo fursado Shaqo.
Sidoo kale Wasiirka Dhalinyaradda iyo Isboortiga oo ka hadashay Munaasabadda ayaa xustay muhiimada ay dhalinyaradda Soomaaliyeed u leeyihiin horumarka dalka ee loo baahanyahay maanta iyo weliba kan mustaqbalka fog.
Previous articleRa’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka “Xukuumadda waxaa ka go’an ka mira dhalinta in dalka la gaarsiiyo doorashooyin xor ah”
Next articleEmmanuel Macron oo ku guuleystay doorashada Madaxweyne ee Dalka Faransiiska